चालक दिन - यो पक्कै पनि हाम्रा देशमा प्रेम र खुशी साथ उल्लेख एक राष्ट्रीय छुट्टी हो। उहाँले अक्टोबर को शरद ऋतु महिनाको अन्तिम आइतवार पर्छ।
छुट्टै कुराकानी, तर यो अधिकांश मानिसहरू लागि जीवनको एउटा अपरिहार्य विशेषता भएको छ भन्ने तथ्यलाई, यो स्पष्ट तथ्य छ - स्थान के आधुनिक जीवनमा कार गर्छ। किन हो ड्राइभर दिन ठूलो मुड संग, मना मजा, र धेरै घरमा।
एक पटक यो पेशा एकाइहरु स्वामित्व र वास्तवमा यो बस अद्वितीय थियो, र चालक आफूलाई - अग्रगामी। यो पेशामा को इतिहास Nizhny Novgorod शहर मा आयोजित थियो जो राष्ट्रीय औद्योगिक प्रदर्शनी, मा 1896 मा सुरु भयो। पहिलो रूसी कार त्यहाँ प्रस्तुत भएको थियो, र 1909 मा पहिलो उत्पादन कार रूस मा उत्पादन भएको थियो।
मास्को मा पोस्ट-युद्ध 1946 मा पहिलो ठूलो यात्री जन्म भएको थियो मानिसहरूको कार Moskvich 400. कार को पाङ्ग्रा पछि बैठक एक सम्मान थियो, र यो चालक पेशा छ एक प्रतिष्ठित र धेरै लाभदायक मानिन्छ।
सडक सधैं मानिस beckoning छ, त्यो उच्च गति मा सार्दा पनि अत्यन्तै अवसर अप खुल्छ, र पक्कै पनि लगातार अगाडि गति को प्रतीक हो। चालक दिन - एक अवसर जसको जीवन सडक जोडिएको छ एक तालिका फरक मान्छे, मा भेला गर्न। माल वा यात्रु वहन गर्ने एक व्यक्ति बाटोमा नियमित छन्। उहाँले महत्त्वपूर्ण व्यापार मा परिवार र मान्छे को मित्रहरुलाई तिनका साथीहरू प्राप्त गर्न rushes वा आराम गर्न, तर आफ्नो लोड कहीं धेरै स्वागत छ। यी मानिसहरू को प्राण मा, को पाठ्यक्रम, यात्रा प्रेमीहरूको, किनभने तिनीहरूले सजिलै राष्ट्रिय सीमानाहरू पार गर्न सक्नुहुन्छ।
ड्राइभर को दिन मा विशेष देशको आर्थिक विकासमा यो पेशामा योगदान उल्लेख गरे। बिना ढुवानी गर्न आफ्नो जिम्मेवार मनोवृत्ति सबैभन्दा घमन्डी परियोजनाहरू पूरा छैन। आफ्नो काम बाट पनि केही हदसम्म निर्भर आर्थिक वृद्धि र देश को सामाजिक राम्ररी जा।
निस्सन्देह, छुट्टी र सैन्य चालक सँगसँगै को दिन। बस महान देशभक्तिपूर्ण युद्ध मा विजय यो कठिन पेशा को मान्छे गरेको योगदान को लाग्छ। निस्सन्देह, यो विशाल र योग्य मा मूल्यांकन छ। सैन्य चालक दोस्रो मृत्यु बारे सोच बिना आफ्नो जीवन risked। आफ्नो ट्रक को समयमा, तिनीहरूले बारूद र चिकित्सा आपूर्ति, प्रावधान र पानी ल्याए। आगो बाहिर, तिनीहरू बाहिर घाइते सैनिकहरु र नागरिकहरु, साथै Neva को नाजुक बरफ Leningrad मा थकित बच्चा भोक लगे, हरेक कसरी बहुमूल्य दिन साकार लिए। मातृभूमि युद्ध चालक कहिल्यै, तिनीहरूलाई आदर र महिमा भूल हुनेछ!
चालक उहाँले कविता र गीतहरू मा प्रशंसा, अरोचक र कहिलेकाहीं धेरै खतरनाक काम, र यो विशेष, soulful गीतहरू छ। तिनीहरूले चालक निश्चित कसैले प्रतीक्षामा छ र रुचि, तिनीहरूलाई प्रत्येक घर सुरक्षित र ध्वनि फिर्ता भनेर हुन।
को कार सबैलाई सपना को चालक अभिवादन को दिन सबैतिर सुनेको छन् मा, र पाङ्ग्रा पछि प्राप्त। यो पेशामा अघि मात्र मानिसहरू लागि थियो भने, तर अब महिलाहरु पनि सक्रिय कार चलाउनु गर्न थाले। त्यसैले यो छुट्टी इंसाफ से खुसीसाथ चालक celebrates गर्ने कमजोर सेक्स, पर्छ।
बधाई परिवहन मंत्रालय र सहकर्मी बाट दिन मा जानुहोस्। एक Solemn बैठक र नगद पुरस्कार, मजा र कन्सर्ट चालक को कठिन जीवन बारे मनपर्ने गीतहरू प्रस्तुति - कि छ दिन कसरी जान्छ।
यो पेशामा मानिसहरू एक मूल्यवान नियम छ - समस्यामा फेंक छैन प्रति व्यक्ति एक तरिका हो। यो, कुनै शङ्का, मान्छे किनभने केहि बाटोमा हुन सक्छ, साहसी र लगातार छन्। बरु ड्राइभिङ भन्दा घरमा यो छुट्टी मनाउन गर्ने आफ्नो ग्लास जुटाउने निश्चित हुन र इच्छालाई कहाँ छ टोष्ट, भन्न हुनेछ ती चालक "को नङ र रड को अभाव।" यो धेरै रोचक र सायद अप्रत्याशित हो, धेरै रोमान्टिक पेशा हो। चालक एक विशाल अनुपात जाँदा भोज, र तिनीहरूलाई को भन्दा को लागि यो दिन अझै विशेष हुनेछ।
सबैभन्दा रमाइलो खेल जन्मदिन बच्चाहरु लागि पार्टी
एक नयाँ वर्षको छवि कसरी छनौट गर्ने?
रूस मा दिन नगरपालिका कामदारहरूको
लिपि 35 वर्ष महिला को वार्षिकोत्सव
नयाँ वर्षको लागि एक क्रिसमस रूख कसरी सजाउनु गर्न
जब तातियाना दिन - विद्यार्थीलाई दिन?
टर्बो पास्कल। जबकि ... डु - एक पूर्वर्शत संग पाश
म्याग्लेन्स स्ट्रिट्स। खोज को इतिहास
2 बस्ट आकार, वा तेस्रो: परिभाषा कसरी गर्ने? हामी आफ्नै आकार आशा। आकार चार्ट
होटल Kkaras होटल2* (Ayia नापा, साइप्रस): वर्णन, सुविधा र समीक्षा
Ceresit (प्लास्टर): गुणहरू, विनिर्देशों, दृश्य र समीक्षा
अफ्रीका - प्रकृति को जंगली संसारमा। रोचक तथ्य
शंकुधारी वन - बलियो स्वास्थ्य स्रोत
डायनेमो: को बिजुली शक्ति ऊर्जा मा ऊर्जा को परिवर्तन
"प्लेबय"। "प्लेबय" को संस्थापक: जीवनी, फोटो, पत्नी